DAAWO:Shacabka Buuhoodle oo ku dhawaaqay war uusan ku farxin madaxweyne Denni & Maamul cusub oo lagaga dhawaaqayo Sool Iyo Sanaag
November 10, 2019 Mahad Jama 1
BUUHOODLE(P-TIMES)- Shacab weynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa si adag uga hadlay weerarkii lagu qaaday xarunta Baarlamaanka Puntland kaas oo sababay dhimashada dad shacab ah, masuuliyiin iyo ciidamo kala duwan, waxaana ay eedayn u jeediyeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni.
Waxa ay sheegeen in C/xakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed uu yahay gudoomiyaha saxda ah ee Baarlamaanka Puntland isla markaasna sifo sharci ah xilka looga qaadi karo.
Sidoo kale waxa ay sheegeen in ay si aad ah uga xun yihiin weerarkii lagu qaaday xarunta Baarlamaanka Puntland isla markaasna awood loo sheegtay gudoonka oo aanan loo marin wado sharci ah.
“Dadkii shacabka ahaa baa lagu laayey oo cagta lagu mariyey iyadoo loola jeedo cabudhintaas iyo hawshaas loola jeedo oo lagu laayey oo dhimasho iyo dhaawacba ay kasoo gaadhay” Sidaas waxaa yidhi mid kamid ah odayaasha dhaqanka Buuhoodle.
Dhanka kale waxa ay ka tacsiyeeyeen dhacdadaasi, iyagoona alle uga baryey dadkii ku dhintay in uu u naxariisto sidoo kalena uu caafimaad siiyo kuwii kale ee ku dhaawacmay.
Midow cusub oo dhex mara shacabka goboladda Sool iyo Sanaag ayey ku dhawaaqeen, waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in ay dhistaan goboladdaasi maamul goboleed ay u dhan yihiin dadka kasoo jeeda Sool iyo Sanaag.
Buuhoodle iyo inta wax la ah way fiican tahay in ay ka go’aan puntlaan.Sababtoo ah dhib iyo kharash ma ahee manaafacaad puntlaan kuma qabto.In ay ka tagaan puntlaan waa muhiim.Waayo dhib unbay la soo taagan yahiin.Had iyo jeer dhaqaalay raadinayaan.Magaalooyin la mida kuwooda bay dhaqaalo ka rabaan.Goormuu dhulbahanye dhaqaalo helayaa?Waligoood saas bay ugu soo jireen shaxaad iyo huteelo la geeyo.Canshuuraha laga soo qaado boosaaso iyo gaalkacyo bay rabaan in ay ku qayilaan.Magaalooyinkooda kama qaadaan cashuuro.Waxaase u muuqda kuwa puntlaan.Waxaa reer puntlaan dani ugu jirtaa in uu dhulbahante ka go’o oo uu isagu gooni isu maamulo.Waayo dadkaas lama hayn karo.Waxay rabaan in la biilo oo lagu kharash gareeyo wax an la awooodin.17 xildhibaan bay ku leeyahiin garoowe.4 ama lix wasiir bay ku leeyahiin puntlaan.11 ku xigeen bay ku leeyahiin puntlaan.12 sargaal oo ciidamada ah bay ku leeyahiin puntlaan.Shaqaalaha kale xisaab ma leh.Intaas masharadooda waxaa laga bixiyaa canshuuraha majeerteen.fadlan dhulbahante aynuu daris noqono oo naga taga ama aada meeshaad aadi jirteen kolba waad aadaysaane.